Ciidamo tababar sare qaba oo Qarax lagula eegtay duleedka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa waxaa saakay qarax lagula eegtay deegaanka Carbiska ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in qaraxaas uu ahaa miino nooca laga hago meelaha fog-fog, waxaana lala eegtay gaari ay saarnaayeen Ciidanka Booliska Haramacda oo ku sugnaa deegaanka Carbiska.
Ciidanka la qarxiyay ayaa waxaa la sheegay inay ilaalo ka haayeen qaar kamid ah shaqaalaha dhismaha ka wada wadada dheer ee xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo hee gaba-gabo mareysa.
Ilaa iyo Saddex Askari oo ka tirsan Ciidanka Booliska dowladda ee Haramcad ayaa la sheegay in qaraxaas waxyeelo kasoo gaartay, isla markaana dubo xilligaas loo qaaday Xarun Caafimaad, si xaaladda Caafimaad loogu dabiibo.
Al-shabaab ayaa horey qaraxyo isugu jiray miino iyo kuwo Is-miidaamin ahaa ku weeraray shaqaale dhismo ka waday wadada u dhexeeysa Muqdisho iyo Afgooye, waxaana qaraxayadaas ku geeriyooday Injineero Turki iyo Ciidamo Haramcad ah oo ilaalo ka haayay.